MPITONDRA TUC TUC AO TOAMASINA Nitokona fa tsy nahazo fanampiana
Toy ny mpamily fiara karetsaka sy taxi be ary ireo mpanampy azy dia mahatsiaro ho mijaly ihany koa ireo mpitondra tuc tuc ao Toamasina. Raha bangoina mantsy dia efa herinandro mahery ihany koa izy ireo izao no tsy nihetsika nampidi-bola nefa mamelom-bady aman-janaka avokoa.
Nitokona nanoloana ny lapan’ny tanànan’i Toamasina naneho ny tsy hafaliany izy ireo omaly maraina noho izany no sady mitaky amin’ny filoham-pirenena ny amin’izay anjara fanampiana tokony ho azy. Nambaran’ny solontenan’izy ireo fa tsy tokony hatao zanak’Ikala hafa rehefa mpamily mamelom-bady aman-janaka indrindra amin’izao hamehana mahazo ny firenena izao. Mahatratra 1.911 izy ireo no nanatanteraka ity fitokonana ity omaly maraina. Mikasika ny fiainan’ny mponina amin’ny ankapobeny ao Toamasina dia olona maro no manao antso avo amin’ny fanjakana ny mba hijerena manokana ireo mpitarika posy ihany koa. Mahatratra 9100 eo ho eo mantsy ny isan’izy ireo izay tsy mahita hanin-kohanina intsony amin’izao ka ahiana hanaotao foana. Miisa 420 kosa ireo mpatory an-dalana raha 1.220 ireo mpivaro-tena izay mivondrona anaty fikambanana miisa efatra.